Ukusetshenziswa kwemali kumaSocial Media ngokwe-Fortune CMOs
Imali Echithwa Ezokuxhumana Komphakathi Ukukhulisa i-18% + eminyakeni emi-5
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 15, i-2011 NgeSonto, Okthoba 19, 2014 Douglas Karr
The Ucwaningo lwe-CMO iqoqa futhi isakaze imibono yabathengisi abaphezulu ngenhloso yokuqagela ikusasa lezimakethe, ukulandelela ubuhle bezentengiso, nokwenza ngcono ukubaluleka kokumaketha kumafemu nasemphakathini.
Isilayidi esiyisihluthulelo, okuyi I-Marketing Pilgrim waveza ukuthi kulindelwe ukusetshenziswa kwezokuxhumana… ukukhula okungaguquguquki kusekelwa kakhulu ngaphakathi kocwaningo.
Isungulwe ngo-Agasti 2008, i Ucwaningo lwe-CMO ilawulwa kabili ngonyaka ngenhlolovo ye-Intanethi. Imibuzo iyaphindwa ngokuhamba kwesikhathi ukuze ukuthambekela kutholakale. Kwethulwa izihloko ezikhethekile kunhlolovo ngayinye - Lokhu ukuphatha kwe-6.
Tags: 2011Ucwaningo lwe-cmosocial mediaukusetshenziswa kwezokuxhumana
Ungayithola kanjani imibono yebhulogi usebenzisa iGoogle
Ngubani Ubani Wokukhangisa Kwenjini Yokusesha Kwakho